२०७८ मङ्सिर १२ आइतबार ०८:३३:००
साहित्यकार मायादेवी गुरुङको पहिलो साहित्यिक कृति (कवितासंग्रह) ‘जिन्दगी’ लोकार्पण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) नेपाल शाखाले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राज्ञ डा. जगमान गुरुङले सो संग्रह सार्वजनिक गरेका हुन् ।
डा. गुरुङले कार्यक्रममा भाषाको विरोध गर्नुभन्दा सिर्जनामा लाग्न जोड दिए । ‘भाषाको विरोधभन्दा सिर्जनामा लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो,’ गुरुङले भने । भाषा र संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा लाग्न उनले सबैलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले कवयित्री गुरुङले सानैदेखि साहित्यको अध्ययनमा रुचि राख्ने गरेकाले सिर्जना गर्न प्रेरणा मिलेको बताए । ‘साहित्यको अध्ययनले नै कविता लेख्ने बाटो देखाएको हो,’ उनले भने । कार्यक्रममा साहित्यकार माया ठकुरीले नारी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका पक्षमा ‘जिन्दगी’ कवितासंग्रहले आवाज उठाएको उल्लेख गरिन् ।
अनमेल विवाह र छोरीप्रतिको हेलाको भावबारे कविताले जागरणको काम गर्ने उनको भनाइ थियो । समालोचक ज्ञानु अधिकारीले विदेशमा बस्दा स्वदेशी याद आध्यात्मिक भावनाका कविताका रूपमा नेपाली साहित्य फाँटमा देखा परेको बताए । –रासस
थपलियाका दुई कृति एकसाथ लोकार्पण
सगरमाथाबारेको पुस्तक ‘पन्ध्रौँ चुली’ लोकार्पण